Nayakhabar.com: रियो ओलम्पिकमा नेपालले ५ खेलमा सहभागिता जनाउने, हेर्नुस् कुन खेलमा कुन खेलाडी हुनेछन् सहभागि ?
रियो ओलम्पिकमा नेपालले ५ खेलमा सहभागिता जनाउने, हेर्नुस् कुन खेलमा कुन खेलाडी हुनेछन् सहभागि ?
काठमाडौं । नेपाली खेलकुदलाई जब अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको निम्तो आउँछ। त्यसले खेलाडीलाई कम, खेल पदाधिकारीलाई बढी उत्साही बनाउँछ। यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ, ब्राजिलमा सुरु हुन लागेको रियो ओलम्पिक।
‘यो नेपाली खेलकुदको बिडम्बना नै हो,’ नेपालका कीर्तिमानधारी म्याराथन धावक बैकुण्ठ मानन्धर भन्छन्। यस्तै अर्का ओलम्पियन दीपक विष्ट पछिल्लो समय खेलकुदमा राजनीति हाबी बन्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्छन्। विष्टले भने,‘अब किन खेल खेल्नुपर्‍यो राजनीतिक दलको टिकट लिए भइहाल्यो नि।’
श्रोतका अनुसार ओलम्पिक भिलेजमा टिमभन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई बसोबासको व्यवस्था मिलाउन ओलम्पिक कमिटीले यस्तो रवैया अपनाउने गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले ओलम्पिकमा सहभागी हुने खेलाडीको संख्याअनुसार कति पदाधिकारीलाई भिलेजमा बस्न दिने भन्ने कोटा निर्धारण गर्ने गरेको छ। यसमा पुरुष र महिला खेलाडीको हकमा छुट्टा–छुट्टै प्रशिक्षक र व्यवस्थापक, चिकित्सक र फिजियोलाई ओलम्पिकमा भाग लिन दिने व्यवस्था गर्दैआइरहेको छ।
ओलम्पिकको भिलेजमा बस्न सहभागी सवै राष्ट्रले आफ्नो कोटाअनुसार आयोजक कमिटीलाई अग्रिम पैसा बुझाउनु पर्छ। त्यही कोटाअनुसार आयोजक कमिटीले प्रतियोगिता अवधिभरि त्यतिमात्र संख्यामा व्यक्तिहरूलाई उसको अपार्टमेन्टमा बस्ने स्विकृति दिनेगर्छ।‘अपार्टमेन्टमा प्रवेश नगरेका खेलाडीबाहेक अन्यको हकमा उनीहरू भिलेजमा बस्न पाउँछन्। तर, खेलाडीसँगै डाइनिङमा बसेर खाना खान पाउदैनन्,’ सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिएको नेपाल ओलम्पिक कमिटीका कोषाध्यक्ष पुरुषोत्तमप्रसाद श्रेष्ठ भन्छन्।